ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၃-၇-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၃-၇-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လက်ရေးမူစာအုပ်ကို ရေနံချောင်း အထကသို့ ပြန်လည်အပ်နှံရန် အရှင်ဆန္ဒာဓိက တောင်းဆို click
- ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး အပါအ၀င် ၃ ဦးကို ၅ ကြိမ်မြောက် ရုံးထုတ် click
- ပုသိမ်တွင် လက်ပံတောင်းအရေးလှုပ်ရှားသူ ၃ ဦး တရားစွဲခံရ click
- လက်ပံတောင်းစီမံကိန်း စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုမှု ပြည်သူကို ချပြရန် ဒေသခံတို့ တောင်းဆိုဆန္ဒပြ click
- NDF ၏ ကချင်ပြည်နယ်တာဝန်ခံ ဒေါ်ဘောက်ဂျာကို လူသေစေမှုဖြင့် တရားစွဲမှု ယနေ့ စစ်ဆေးမည် click
- စစ်တွေ ဒုက္ခသည်စခန်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ အကြမ်းဖက်ခံရမှု သံသယရှိသူ ၂ ဦးကို ရဲဖမ်း click
- သတ်မှတ်လုပ်ခလစာ မပေးသည့် အလုပ်ရှင်ကို အလုပ်သမားကိုယ်စား အစိုးရအရာရှိက တရားစွဲနိုင် click
- သမ္မတ ကတိအတိုင်း နိုင်/ကျဉ်းများကို စလွှတ်ပေးပြီ click
- တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် နှစ်ရှည်အကျဉ်းသားများ ပြန်လွတ် click
- လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၇၂ ဦး ထပ်မံလွတ်မြောက် (ရုပ်သံ) click
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၇၃ ဦး ပြန်လည်လွတ်မြောက်၊ အကုန်အစင် မဟုတ်သေး (ရုပ်သံ) click
- လွတ်မြောက်လာသော ဦးဘရန်ရှောင်အား ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း ကိုယ်တိုင် စခန်းသို့ ပို့ပေး click
- မြစ်ကြီးနား KIO Technical Advisory Team ရုံး ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ (ဓာတ်ပုံ) click
- တရုတ်စစ်တပ် ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တဦး မြန်မာနိုင်ငံ ရောက်ရှိ click
- တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက် ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ရှိရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း click
- ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသား ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ ဂါရ၀ပြုပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီး click
- တပြည်လုံး အပစ်ရပ်ရေးတွင် အစိုးရနှင့် တပ်မတော်ကိုယ်တိုင်ပါ လက်မှတ်ရေးထိုးသင့်၊ UNFC ထောက်ပြ click
- ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း KIA တပ်များနှင့် အစိုးရတပ် တိုက်ပွဲဖြစ်နေ click
- မွန်ပြည်သစ်ပါတီတပ်သား ၂ ဦးကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆို click
- ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာပြီးနောက် ... click
- ကေအိုင်အို အလုပ်အဖွဲ့ရုံး မြစ်ကြီးနားတွင် ဖွင့်လှစ် click
- အစိုးရနှင့် KIO တို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ညှိနှိုင်းအဖြေရှာမည့် အလုပ်အဖွဲ့ရုံး ဖွင့်လှစ်လိုက် click
- KIO ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအကြံပေးအဖွဲ့ Technical Advisory Team ရုံးကို မြစ်ကြီးနားတွင် တရားဝင် ဖွင့်လှစ် click
- KIO သည် Technical Team ရုံး ဖွင့်နိုင်သော်လည်း Team ဖွဲ့ရန် အခက်တွေ့နေဆဲ click
- ကရင့်အမျိုးသားတပ်မတော် တခုတည်းဖြစ်ရေး သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေး click
- ၁၈ နှစ်အောက်ကလေး ကျနော်တို့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထဲမှာ မရှိဘူး (မေးမြန်းခန်း) click
- ယမ်းငွေ့ဝေဆဲ ကရင့်နယ်မြေ (ရုပ်သံ) click
- ပြိုင်တူ တွန်းလျှင် ရွေ့နိုင်ပါသည် (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) click
- ဗဟုဝါဒသည် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သော့ချက် (သဘောထားအမြင်) click
- မန္တလေးတရားပွဲ ပေါက်ကွဲမှု လက်လုပ်ဗုံးကြောင့်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ ထုတ်ပြန် click
- ဗုံးကွဲမှု ဖြစ်ပေမယ့် ဦးဝီရသူ တရားပွဲများ ဆက်ဟောမည် click
- ဘာသာတခုနှင့်တခု ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နိုင်ခြင်းကြောင့် တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းကို ကန့်ကွက်ဟု ဆို click
- လှုမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ရေးဆွဲ click
- ပြည်ပရောက် တပ်မတော်သားဟောင်းများအတွက် ရှစ်လေးလုံးညီလာခံတွင် ဆွေးနွေးလို click
- အနီရောင် စုတ်ချက်ပြင်းပြင်းတို့ ပါဝင်တဲ့ ရှစ်လေးလုံး “ငွေရတုအထိမ်းအမှတ်” အနုပညာပြပွဲ click
- ဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက် ညီလာခံ ကျင်းပကာ တာဝန်သစ်များ ရွေးချယ်ခန့်အပ် (ရုပ်သံ) click
- နယ်စပ်ဒေသက လူငယ်တွေ စွမ်းရည်မြင့်သင်တန်းအတွက် ရန်ပုံငွေရှာမည်ဟုဆို (ရုပ်သံ) click
- မြန်မာနိုင်ငံသို့ ချိတ်ဆက်ထားသည့် SEA-ME-WE3ရေအောက် ဖိုက်ဘာဆက်ကြောင်း ပြတ်တောက် (ရုပ်သံ) click
- မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက SMS ဖြင့် အင်တာနက် လျှောက်ခွင့်ပြု click
- မှောင်ခိုဈေးကွက်မှ စတော့ဈေးကွက်ဆီသို့ ... click
- ကုန်သွယ်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်သင်တန်း အီးယူ ပေးမည် click
- မလေးရှားမှ တင်သွင်းသည့် အထွက်တိုးစပါးမျိုးအား ပြည်တွင်း၌ ပြန်လည်ရောင်းချမည် click
- ဆိုက်ရာနိုက် အသုံးပြုဇုန် သတ်မှတ်၍ ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်မည် click
- ပြည်တွင်းဓာတ်ဆီ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးမှု လုံးဝရပ်ဆိုင်းခြင်းကြောင့် ဈေးနူန်းပြောင်းလဲမည်ကို စိုးရိမ် click
- လာမည့် ခရီးသွားရာသီ နယ်စပ်ဂိတ်များမှ ခရီးသွားများ ပိုမိုဝင်ရောက်လာနိုင် click
- မှောင်ခိုဈေးကွက်ကြောင့် နိုင်ငံခြားငွေ နှုန်းရှင်စနစ် ကျင့်သုံးလျှင် အနည်းအငယ် ထိန်းကျောင်းရန်လိုဟု ဆို click
- တောင်သူလယ်သမားကုမ္ပဏီ ရှယ်ယာတစောင် တထောင်ဖြင့် ရောင်းမည် click
- မြရည်နန္ဒာ တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာကို ရှစ်လနှင့်အပြီး တည်ဆောက်မည်ဟု ဆို click
- မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသည်းရောင်အသားဝါရောဂါ ဖြစ်ပွားနှုန်း မြင့်မားလျက်ရှိ (ရုပ်သံ) click
- မွန်နှင့် ကရင်နှစ်ပြည်နယ်ဆက် ကားလမ်းကြောင့် မြေဈေး ၂ ဆကျော် ထိုးတက် click
- အငှားယာဉ်မောင်းတွေကို ဘယ်သူ စည်းကြပ်မလဲ click
- ခိုးကူးခွေ ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းတခု ရဲ ဖမ်းမိ click
- ဓားဖြင့် အိမ်ပေါ်တက်ကြိမ်းသူကို ပုဒ်မနှစ်ခုဖြင့် တရားစွဲ click
- သစ်ပင်ပေါ် ကြက်တက်ဖမ်းရာက ဓာတ်လိုက်သေဆုံး click
- အစိုးရပိုင်သင်္ဘောမှ ၀န်ထမ်းတဦး ခရီးသည်ကို အဓမ္မကျင့်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရ click
- အဓမ္မပြုကျင့်သည်ဟု စွပ်စွဲကာ အိမ်ရှင်အဖိုးအိုအား အိမ်အကူက အမှုဖွင့် click
- ဆီးဂိမ်းရလဒ်က နေရှင်နယ်လိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ထိခိုက်မည်မဟုတ်ဟု အသင်းပိုင်ရှင်များ ဆို click
- ကေအိုင်အိုဌာနချုပ်ရှိ ကူမင်းအမျိုးသားကောလိပ်၏ ပထမဆုံးနှစ်သင်တန်း ဩဂုတ်တွင် ဖွင့်ပြီ click
- နွမ်းပါးတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေအတွက် ရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေပွဲ ကျင်းပမယ် click
- ကမ္ဘာ့အဆင့်သင်္ချာပြိုင်ပွဲ မြန်မာကျောင်းသား ၈ ဦး ရွှေတံဆိပ်ဆုရ click
- ကလေးစကား နားထောင်နည်း (စာဖတ်ခန်း) click
- စည်းကမ်းမဲ့ ပါးစပ်နဲ့ ကွမ်းစားတတ်သူများ (သူ့အမြင်) click
- အရှက်ကို အသက်နှင့်လဲနေရသူများ (ဆောင်းပါး) click
- အီဂျစ်သမ္မတဟောင်း မော်စီ၏ မိသားစုက ပြန်ပေးဆွဲမှုဖြင့် စစ်တပ်ကို တရားစွဲရန် စီစဉ် (ရုပ်သံ) click
- ကွမ်တန်ရူပဗေဒကို ဟားဗတ်မှာ လေ့လာမယ့် ၁၀ နှစ် အရွယ် မက်ဆီကန်ကလေးငယ် click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 8:32 PM
ရေအောက် ဖိုင်ဘာ ဆက်ကြောင်း SEA-ME-WE3က ပြတ်တောက် တာ
INTERNET CONNECTION က အမြဲနှေးနေတော.
ဖြတ်တောက်တဲ. အဖွဲ.သီးခြားရှိသလားလို. ပါရှင် ။
သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဘီဘီစီ အင်တာဗျူးမှာ.. သမ္မတကြီးမသိဘဲ စစ်တပ်က မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ စစ်ရေးအဆက်အသွယ် လုပ်တာမျိုးကော မရှိနိုင်ဘူးလား..လို့ မေးတော့ ဦးသိန်းစိန်က ဒါတော့ ကျွန်တော်လည်း မပြောတတ်ပါဘူး.. လို့ ဖြေခဲ့တယ်။ အဲဒီအင်တာဗျူး အွန်လိုင်းမှာ စရောက်လာကတည်းက အင်တာနက်လိုင်းတွေ နှေးကွေးသွားလိုက်တာ နောက်တော့ ကြားနေကြ SEA-ME-WE3 ပြတ်တောက်တယ်ဆိုတာကြီးနဲ့ တိုင်းပြည်ကို အမှောင်ချတော့တာပါပဲ။
အင်တာနက်တွေ တစ်လလောက် နှေးမယ်ဆိုတော့ ရီစရာပြက်လုံးတစ်ခု ကြားရသလိုပါပဲ။ ဘယ်တော့မှ မမြန်တဲ့ အင်တာနက်က နှေးဦးမယ်ဆိုတော့ လှတောသားတွေ ပြောသလို ကျောက်ရုပ်ကိုမေ့ဆေးထိုးထားသလို ဖြစ်နေတော့မှာပေါ့။ တကယ်ပါပဲ.. နှေးလွန်းလို့ စိတ်တိုပြီး ခေါင်းတောင်ကိုက်တယ်။ တိုင်းပြည်အပေါ် ညာတဲ့အလုပ်တွေ၊ ဗြောင်လိမ်တဲ့အလုပ်တွေ စွန့်လွှတ်သင့်ပါပြီ။
My Archive 09/16 - 09/23 (29) 09/23 - 09/30 (59) 09/30 - 10/07 (36) 10/07 - 10/14 (38) 10/14 - 10/21 (38) 10/21 - 10/28 (26) 10/28 - 11/04 (47) 11/04 - 11/11 (29) 11/11 - 11/18 (30) 11/18 - 11/25 (28) 11/25 - 12/02 (21) 12/02 - 12/09 (13) 12/09 - 12/16 (20) 12/16 - 12/23 (24) 12/23 - 12/30 (22) 12/30 - 01/06 (26) 01/06 - 01/13 (26) 01/13 - 01/20 (19) 01/20 - 01/27 (19) 01/27 - 02/03 (15) 02/03 - 02/10 (16) 02/10 - 02/17 (12) 02/17 - 02/24 (17) 02/24 - 03/02 (13) 03/02 - 03/09 (13) 03/09 - 03/16 (17) 03/16 - 03/23 (18) 03/23 - 03/30 (8) 03/30 - 04/06 (11) 04/06 - 04/13 (9) 04/13 - 04/20 (6) 04/20 - 04/27 (9) 04/27 - 05/04 (10) 05/04 - 05/11 (12) 05/11 - 05/18 (7) 05/18 - 05/25 (10) 05/25 - 06/01 (8) 06/01 - 06/08 (17) 06/08 - 06/15 (11) 06/15 - 06/22 (17) 06/22 - 06/29 (6) 06/29 - 07/06 (9) 07/06 - 07/13 (17) 07/13 - 07/20 (13) 07/20 - 07/27 (16) 07/27 - 08/03 (16) 08/03 - 08/10 (11) 08/10 - 08/17 (15) 08/17 - 08/24 (12) 08/24 - 08/31 (8) 08/31 - 09/07 (13) 09/07 - 09/14 (8) 09/14 - 09/21 (9) 09/21 - 09/28 (6) 09/28 - 10/05 (10) 10/05 - 10/12 (12) 10/12 - 10/19 (14) 10/19 - 10/26 (14) 10/26 - 11/02 (12) 11/02 - 11/09 (14) 11/09 - 11/16 (16) 11/16 - 11/23 (14) 11/23 - 11/30 (11) 11/30 - 12/07 (15) 12/07 - 12/14 (13) 12/14 - 12/21 (13) 12/21 - 12/28 (17) 12/28 - 01/04 (16) 01/04 - 01/11 (21) 01/11 - 01/18 (21) 01/18 - 01/25 (20) 01/25 - 02/01 (18) 02/01 - 02/08 (17) 02/08 - 02/15 (25) 02/15 - 02/22 (19) 02/22 - 03/01 (17) 03/01 - 03/08 (24) 03/08 - 03/15 (15) 03/15 - 03/22 (15) 03/22 - 03/29 (22) 03/29 - 04/05 (21) 04/05 - 04/12 (18) 04/12 - 04/19 (14) 04/19 - 04/26 (16) 04/26 - 05/03 (17) 05/03 - 05/10 (12) 05/10 - 05/17 (17) 05/17 - 05/24 (20) 05/24 - 05/31 (24) 05/31 - 06/07 (21) 06/07 - 06/14 (18) 06/14 - 06/21 (17) 06/21 - 06/28 (15) 06/28 - 07/05 (16) 07/05 - 07/12 (16) 07/12 - 07/19 (19) 07/19 - 07/26 (19) 07/26 - 08/02 (20) 08/02 - 08/09 (22) 08/09 - 08/16 (15) 08/16 - 08/23 (19) 08/23 - 08/30 (14) 08/30 - 09/06 (15) 09/06 - 09/13 (13) 09/13 - 09/20 (15) 09/20 - 09/27 (14) 09/27 - 10/04 (15) 10/04 - 10/11 (13) 10/11 - 10/18 (15) 10/18 - 10/25 (13) 10/25 - 11/01 (14) 11/01 - 11/08 (17) 11/08 - 11/15 (16) 11/15 - 11/22 (12) 11/22 - 11/29 (16) 11/29 - 12/06 (14) 12/06 - 12/13 (14) 12/13 - 12/20 (18) 12/20 - 12/27 (15) 12/27 - 01/03 (12) 01/03 - 01/10 (12) 01/10 - 01/17 (14) 01/17 - 01/24 (11) 01/24 - 01/31 (16) 01/31 - 02/07 (13) 02/07 - 02/14 (14) 02/14 - 02/21 (17) 02/21 - 02/28 (8) 02/28 - 03/07 (12) 03/07 - 03/14 (19) 03/14 - 03/21 (15) 03/21 - 03/28 (17) 03/28 - 04/04 (16) 04/04 - 04/11 (14) 04/11 - 04/18 (17) 04/18 - 04/25 (17) 04/25 - 05/02 (18) 05/02 - 05/09 (15) 05/09 - 05/16 (18) 05/16 - 05/23 (12) 05/23 - 05/30 (13) 05/30 - 06/06 (11) 06/06 - 06/13 (14) 06/13 - 06/20 (13) 06/20 - 06/27 (17) 06/27 - 07/04 (14) 07/04 - 07/11 (21) 07/11 - 07/18 (16) 07/18 - 07/25 (22) 07/25 - 08/01 (15) 08/01 - 08/08 (15) 08/08 - 08/15 (21) 08/15 - 08/22 (15) 08/22 - 08/29 (16) 08/29 - 09/05 (19) 09/05 - 09/12 (15) 09/12 - 09/19 (18) 09/19 - 09/26 (16) 09/26 - 10/03 (19) 10/03 - 10/10 (13) 10/10 - 10/17 (15) 10/17 - 10/24 (15) 10/24 - 10/31 (16) 10/31 - 11/07 (19) 11/07 - 11/14 (13) 11/14 - 11/21 (20) 11/21 - 11/28 (17) 11/28 - 12/05 (24) 12/05 - 12/12 (16) 12/12 - 12/19 (22) 12/19 - 12/26 (16) 12/26 - 01/02 (19) 01/02 - 01/09 (22) 01/09 - 01/16 (20) 01/16 - 01/23 (25) 01/23 - 01/30 (23) 01/30 - 02/06 (14) 02/06 - 02/13 (21) 02/13 - 02/20 (23) 02/20 - 02/27 (20) 02/27 - 03/06 (19) 03/06 - 03/13 (20) 03/13 - 03/20 (20) 03/20 - 03/27 (21) 03/27 - 04/03 (25) 04/03 - 04/10 (21) 04/10 - 04/17 (16) 04/17 - 04/24 (22) 04/24 - 05/01 (16) 05/01 - 05/08 (20) 05/08 - 05/15 (19) 05/15 - 05/22 (26) 05/22 - 05/29 (21) 05/29 - 06/05 (20) 06/05 - 06/12 (22) 06/12 - 06/19 (23) 06/19 - 06/26 (17) 06/26 - 07/03 (20) 07/03 - 07/10 (24) 07/10 - 07/17 (20) 07/17 - 07/24 (22) 07/24 - 07/31 (17) 07/31 - 08/07 (26) 08/07 - 08/14 (29) 08/14 - 08/21 (17) 08/21 - 08/28 (26) 08/28 - 09/04 (20) 09/04 - 09/11 (23) 09/11 - 09/18 (25) 09/18 - 09/25 (20) 09/25 - 10/02 (27) 10/02 - 10/09 (30) 10/09 - 10/16 (46) 10/16 - 10/23 (41) 10/23 - 10/30 (30) 10/30 - 11/06 (36) 11/06 - 11/13 (27) 11/13 - 11/20 (32) 11/20 - 11/27 (18) 11/27 - 12/04 (32) 12/04 - 12/11 (19) 12/11 - 12/18 (19) 12/18 - 12/25 (25) 12/25 - 01/01 (33) 01/01 - 01/08 (42) 01/08 - 01/15 (47) 01/15 - 01/22 (48) 01/22 - 01/29 (42) 01/29 - 02/05 (36) 02/05 - 02/12 (48) 02/12 - 02/19 (43) 02/19 - 02/26 (46) 02/26 - 03/04 (41) 03/04 - 03/11 (41) 03/11 - 03/18 (37) 03/18 - 03/25 (33) 03/25 - 04/01 (31) 04/01 - 04/08 (32) 04/08 - 04/15 (31) 04/15 - 04/22 (33) 04/22 - 04/29 (31) 04/29 - 05/06 (35) 05/06 - 05/13 (39) 05/13 - 05/20 (31) 05/20 - 05/27 (39) 05/27 - 06/03 (34) 06/03 - 06/10 (39) 06/10 - 06/17 (41) 06/17 - 06/24 (40) 06/24 - 07/01 (31) 07/01 - 07/08 (40) 07/08 - 07/15 (35) 07/15 - 07/22 (37) 07/22 - 07/29 (39) 07/29 - 08/05 (30) 08/05 - 08/12 (34) 08/12 - 08/19 (31) 08/19 - 08/26 (34) 08/26 - 09/02 (34) 09/02 - 09/09 (32) 09/09 - 09/16 (37) 09/16 - 09/23 (41) 09/23 - 09/30 (37) 09/30 - 10/07 (32) 10/07 - 10/14 (36) 10/14 - 10/21 (35) 10/21 - 10/28 (26) 10/28 - 11/04 (31) 11/04 - 11/11 (33) 11/11 - 11/18 (32) 11/18 - 11/25 (32) 11/25 - 12/02 (34) 12/02 - 12/09 (34) 12/09 - 12/16 (30) 12/16 - 12/23 (32) 12/23 - 12/30 (36) 12/30 - 01/06 (33) 01/06 - 01/13 (1) 01/13 - 01/20 (12) 01/20 - 01/27 (24) 01/27 - 02/03 (21) 02/03 - 02/10 (22) 02/10 - 02/17 (33) 02/17 - 02/24 (33) 02/24 - 03/03 (31) 03/03 - 03/10 (30) 03/10 - 03/17 (34) 03/17 - 03/24 (35) 03/24 - 03/31 (37) 03/31 - 04/07 (34) 04/07 - 04/14 (27) 04/14 - 04/21 (23) 04/21 - 04/28 (31) 04/28 - 05/05 (28) 05/05 - 05/12 (31) 05/12 - 05/19 (30) 05/19 - 05/26 (28) 05/26 - 06/02 (34) 06/02 - 06/09 (33) 06/09 - 06/16 (30) 06/16 - 06/23 (31) 06/23 - 06/30 (31) 06/30 - 07/07 (35) 07/07 - 07/14 (32) 07/14 - 07/21 (38) 07/21 - 07/28 (30) 07/28 - 08/04 (26) 08/04 - 08/11 (35) 08/11 - 08/18 (29) 08/18 - 08/25 (12) 08/25 - 09/01 (14) 09/01 - 09/08 (9) 09/08 - 09/15 (16) 09/15 - 09/22 (22) 09/22 - 09/29 (12) 09/29 - 10/06 (3) 10/06 - 10/13 (15) 10/13 - 10/20 (13) 10/20 - 10/27 (17) 10/27 - 11/03 (13) 11/03 - 11/10 (19) 11/10 - 11/17 (14) 11/17 - 11/24 (17) 11/24 - 12/01 (20) 12/01 - 12/08 (12) 12/08 - 12/15 (11) 12/15 - 12/22 (11) 12/22 - 12/29 (9) 12/29 - 01/05 (14) 01/05 - 01/12 (14) 01/12 - 01/19 (10) 01/19 - 01/26 (14) 01/26 - 02/02 (11) 02/02 - 02/09 (9) 02/09 - 02/16 (7) 02/16 - 02/23 (14) 02/23 - 03/02 (9) 03/02 - 03/09 (9) 03/09 - 03/16 (8) 03/16 - 03/23 (9) 03/23 - 03/30 (12) 03/30 - 04/06 (8) 04/06 - 04/13 (4) 04/13 - 04/20 (2) 04/20 - 04/27 (19) 04/27 - 05/04 (7) 05/04 - 05/11 (6) 05/11 - 05/18 (27) 05/18 - 05/25 (23) 05/25 - 06/01 (40) 06/01 - 06/08 (31) 06/08 - 06/15 (41) 06/15 - 06/22 (43) 06/22 - 06/29 (82) 06/29 - 07/06 (75) 07/06 - 07/13 (69) 07/13 - 07/20 (44) 07/20 - 07/27 (37) 07/27 - 08/03 (12) 08/03 - 08/10 (18) 08/10 - 08/17 (14) 08/17 - 08/24 (21) 08/24 - 08/31 (26) 08/31 - 09/07 (5) 09/07 - 09/14 (24) 09/14 - 09/21 (20) 09/21 - 09/28 (24) 09/28 - 10/05 (21) 10/05 - 10/12 (22) 10/12 - 10/19 (24) 10/19 - 10/26 (15) 11/02 - 11/09 (16) 11/09 - 11/16 (26) 11/16 - 11/23 (34) 11/23 - 11/30 (20) 11/30 - 12/07 (22) 12/07 - 12/14 (18) 12/14 - 12/21 (21) 12/21 - 12/28 (17) 12/28 - 01/04 (18) 01/04 - 01/11 (18) 01/11 - 01/18 (16) 01/18 - 01/25 (12) 01/25 - 02/01 (16) 02/01 - 02/08 (11) 02/08 - 02/15 (5) 02/15 - 02/22 (8) 02/22 - 03/01 (11) 03/01 - 03/08 (13) 03/08 - 03/15 (24) 03/15 - 03/22 (21) 03/22 - 03/29 (13) 03/29 - 04/05 (8) 04/05 - 04/12 (11) 04/19 - 04/26 (2) 04/26 - 05/03 (2) 05/10 - 05/17 (1) 05/24 - 05/31 (5) 06/07 - 06/14 (1) 06/21 - 06/28 (2) 06/28 - 07/05 (1) 07/19 - 07/26 (5) 07/26 - 08/02 (1) 08/02 - 08/09 (2) 08/23 - 08/30 (1) 08/30 - 09/06 (1) 09/06 - 09/13 (1) 09/13 - 09/20 (1) 09/20 - 09/27 (1) 10/04 - 10/11 (1) 10/11 - 10/18 (3) 10/18 - 10/25 (2) 10/25 - 11/01 (3) 11/01 - 11/08 (1) 11/08 - 11/15 (3) 11/22 - 11/29 (2) 12/06 - 12/13 (4) 12/20 - 12/27 (3) 12/27 - 01/03 (1) 01/17 - 01/24 (2) 01/24 - 01/31 (3) 01/31 - 02/07 (1) 02/14 - 02/21 (2) 02/21 - 02/28 (2) 02/28 - 03/06 (1) 03/06 - 03/13 (1) 03/13 - 03/20 (2) 03/20 - 03/27 (3) 03/27 - 04/03 (3) 04/03 - 04/10 (2) 04/17 - 04/24 (2) 04/24 - 05/01 (1) 05/01 - 05/08 (3) 05/08 - 05/15 (2) 05/15 - 05/22 (3) 05/22 - 05/29 (1) 05/29 - 06/05 (3) 06/05 - 06/12 (4) 06/12 - 06/19 (2) 06/19 - 06/26 (7) 06/26 - 07/03 (5) 07/03 - 07/10 (2) 07/17 - 07/24 (3) 07/24 - 07/31 (3) 07/31 - 08/07 (5) 08/07 - 08/14 (2) 08/14 - 08/21 (3) 08/21 - 08/28 (5) 08/28 - 09/04 (6) 09/04 - 09/11 (4) 09/11 - 09/18 (1) 09/18 - 09/25 (3) 09/25 - 10/02 (4) 10/02 - 10/09 (1) 10/09 - 10/16 (2) 10/16 - 10/23 (2) 10/23 - 10/30 (4) 10/30 - 11/06 (5) 11/06 - 11/13 (5) 11/13 - 11/20 (5) 11/20 - 11/27 (2) 11/27 - 12/04 (1) 12/04 - 12/11 (6) 12/11 - 12/18 (4) 12/18 - 12/25 (1) 12/25 - 01/01 (2) 01/08 - 01/15 (1) 01/15 - 01/22 (1) 01/22 - 01/29 (1) 01/29 - 02/05 (9) 02/05 - 02/12 (1) 02/12 - 02/19 (1) 02/26 - 03/05 (3) 03/05 - 03/12 (7) 03/12 - 03/19 (2) 03/19 - 03/26 (1) 03/26 - 04/02 (1) 04/02 - 04/09 (1) 04/09 - 04/16 (1) 04/16 - 04/23 (2) 04/23 - 04/30 (4) 04/30 - 05/07 (5) 05/07 - 05/14 (5) 05/14 - 05/21 (6) 05/21 - 05/28 (10) 05/28 - 06/04 (4) 06/04 - 06/11 (3) 06/11 - 06/18 (4) 06/18 - 06/25 (4) 06/25 - 07/02 (5) 07/02 - 07/09 (1) 07/09 - 07/16 (3) 07/16 - 07/23 (7) 07/23 - 07/30 (7) 07/30 - 08/06 (3) 08/06 - 08/13 (6) 08/13 - 08/20 (3) 08/20 - 08/27 (1) 08/27 - 09/03 (1) 09/03 - 09/10 (2) 09/10 - 09/17 (1) 09/17 - 09/24 (6) 09/24 - 10/01 (2) 10/01 - 10/08 (1) 10/08 - 10/15 (5) 10/15 - 10/22 (1) 10/22 - 10/29 (3) 10/29 - 11/05 (2) 11/05 - 11/12 (7) 11/19 - 11/26 (4) 11/26 - 12/03 (3) 12/03 - 12/10 (1) 12/10 - 12/17 (2) 12/17 - 12/24 (1) 12/24 - 12/31 (1) 12/31 - 01/07 (3) 01/07 - 01/14 (2) 01/14 - 01/21 (1) 01/21 - 01/28 (1) 01/28 - 02/04 (5) 02/04 - 02/11 (3) 02/11 - 02/18 (2) 02/18 - 02/25 (3) 02/25 - 03/04 (2) 03/11 - 03/18 (1) 03/18 - 03/25 (4) 03/25 - 04/01 (3) 04/08 - 04/15 (2) 04/15 - 04/22 (8)